साउन ७ सम्म लकडाउन थपियो, लकडाउनको मोडालिटी कस्तो ?
Home/Banner News/साउन ७ सम्म लकडाउन थपियो, लकडाउनको मोडालिटी कस्तो ?
१४ असार, काठमाण्डौ | हालकै अवस्थाको लकडाउन साउन ७ सम्मका लागि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउन चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै आएको सरकारले पहिलो चरणकै अवस्थालाई थप गरी साउन ७ सम्म बढाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणको लकडाउन खुकुल्याउने कार्यविधि साउन ७ सम्म लागू गराउने निर्णय गरेको हो।पहिलो चरणमा खुलाईएको आंशिक लकडाउन तीन सातासम्म लागू हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो। असार १ बाट लागू भएको पहिलो चरणको लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्यविधिको अवधि असार २१ मा सकिँदै थियो। तर सोभन्दा एकसाता अघि नै सरकारले साउन ७ सम्म पहिलो चरणमा खोल्ने भनिएका सेवा तथा उद्योग मात्र संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। ुहालकै अवस्था ( लकडाउन खुकुलो बनाउने पहिलो चरण ) को लकडाउन साउन ७ सम्म कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ,ु बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।
साउन ७ सञ्चालन हुने सेवा
सरकाले आगामी असार १ गतेदेखि साउन ७ सम्म विभिन्न कार्यालयको सेवा भने दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा सेवा साउन सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, बैंक तथा वित्तयि संस्था ९दुई सिफ्टमा० सञ्चालन हुने छन्। जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी साधन संचालन गर्न पाइनेछ। यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीलाई दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्ने छ । उक्त सवारीमा आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी मात्रै राख्नुपर्ने छ ।
सरकारले मानिसको बढी भिडभाड हुने र सहभागिता बढी हुने क्षेत्रको हकमा भने हालको व्यवस्थालाई नै कायम गरेको छ। त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। जसअनुसार शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, तोकिएका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सबै प्रकारका तालिम, सेमिनार, सभा, गोष्ठी र भेला पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यस्तै सञ्चालन नहुनेमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, शैलुन, तथा ब्युटीपार्लर, स्विमिङ्पुल, सपिङ मल, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदान, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल यात्रुवाहक सवारी साधान छन्। जोरबिजोर प्रणालीअन्तरगत उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी बाहिर जान नपाउने तथा बाहिरका नीजि सवारी उपत्यका भित्रिन नपाउने व्यवस्था छ।
उपत्यकाका पाँच जनासहित पुन: थपिए काेराेनाका २७ नयाँ संक्रमित